Nhau - Kudhinda nekurongedza: iwe unoziva zvakadii nezve kupatsanurwa kwemabhegi ekurongedza
Kudhinda nekurongedza: unoziva zvakadii nezve kupatsanurwa kwemabhegi ekurongedza
Iko kurongedza bhegi kuri nyore kutakura uye kunogona kushandiswa kubata zvinhu. Zvinhu zvakasiyana-siyana zvekugadzira, senge kraft bepa, chena kadhibhodhi, machira asina kurukwa, nezvimwe. Unoziva here kusarudzika kwehomwe?
1. Promotional kavha mumasaga
Yekusimudzira yekupakata mabhegi akagadzirwa kuburikidza nepakeji yepamusoro kusimudzira uye kugadzira avo vega zvigadzirwa. Rudzi urwu rwekupakata rine mavara akapfuma, uye iwo mavara uye mapateni anokwezva maziso uye dhizaini-senge akajairika mabhegi, nekudaro kukwezva kutarisisa kwevatengi nekusimudzira Chigadzirwa kutengesa.
Pamuenzaniso, iwe unogona kazhinji kuona iyi mhando yekupakata. Zita rekambani, logo yekambani, zvigadzirwa zvikuru kana bhizinesi rezvebhizinesi rekambani zvakadhindwa pahomwe, izvo zvisingaonekwe zvinosimudzira mufananidzo wekambani uye chigadzirwa chigadzirwa, icho chakaenzana neA mobile propaganda, ine huwandu hwakawanda hwekuyerera, haigone chete kuzadzisa izvo zvinodiwa yekukodha, asi zvakare ine yakanaka yekushambadzira mhedzisiro, saka iri fomu inozivikanwa yekushambadzira kwevagadziri uye zvehupfumi nekutengeserana zviitiko. Izvo zvakanyanya kusarudzika dhizaini yerudzi urwu rwekupakisha bhegi, iyo yakawedzera kugadzirwa, inowedzera kushambadza mhedzisiro.
2. Mabhegi ekutenga
Rudzi urwu rwekupakata bhegi rakajairika, rakagadzirirwa muzvitoro, zvitoro uye dzimwe nzvimbo, kuunza nyore kune vatengi kutakura zvinhu zvevatengi. Rudzi urwu rwekupakata bhegi runonyanya kugadzirwa nezvinhu zvepurasitiki. Inofananidzwa nemamwe mabhegi, chimiro chayo uye zvinhu zvacho zvakaomarara uye zvinogona kubata zvimwe zvinhu, uye mutengo wakaderera. Zvimwe zvikwama zvekutengesa zvichaprinta chigadzirwa kana ruzivo rwekambani, izvo zvinogona zvakare kutora chinzvimbo mukusimudzira nekuzivisa.
3. Chipo kurongedza mabhegi
Zvipo zvekurongedza mabhegi zvakagadzirwa zvakagadzirwa, senge iro basa remaboutique mabhokisi, ayo anogona kazhinji kuwedzera kukosha kwezvipo. Iko kunowanzo kuve nemhando nhatu dzezvinhu: plastiki, bepa, uye jira, uye chiyero chekushandisa chakapamhamha kwazvo. Yeyakanaka zvipo kurongedza bhegi inogona zvirinani kuseta yako zvipo. Nemararamiro anogara achichinja, vatengi vane zvakakwirira uye zvepamusoro zvinodiwa zvechipo kurongedza mabhegi, uye akadaro zvipo kurongedza mabhegi ari kuramba achiwedzera kufarirwa.
Kavha mabhegi akaiswa mukati maererano nezvinhu zvavo
Muindasitiri yekudhinda, izvo zvinhu zvehombodo zvehombodo zvinowanzo kuvezwa mapepa, chena bepa, kraft bepa, uye chena kadhibhodhi. Pakati pavo, pepa rakaputirwa rinonyanya kufarirwa nekuda kwekuchena kwayo kwepamusoro uye kubwinya, kuprindwa kwakanaka, uye yakanaka kushambadzira mhedzisiro mushure mekudhinda. Kazhinji, mushure mekuvhara pamusoro peakaputirwa bepa nefirimu rakareruka kana firimu rematte, haringori chete nemabasa ekudzivirira mwando nekusimba, asi rinotaridzika rakanatswa.